यौन सम्पर्क : कसरी दोब्बर आनन्द लिने ?
यौनका विषयमा हामी खुलेर कुरा गर्न सक्दैनौँ । पश्चिमाहरु पूर्वीय भन्दा धेरै खुलेर कुरा गर्छन् । तर संकोच मान्नेकुरामा पश्चिमाहरु पनि उत्तिकै सक्रिय छन् ।
सफल यौन क्रियाले मानिसलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । यौनसुख नै दाम्पत्य सफलताको प्रभावकारी सूत्र पनि हो । त्यसो हो भने हामीले कसरी सफल यौन जीवन बनाउने त ?
यौनलाई सुखमय बनाउनका लागि हामीले नयाँ खालको अभ्यास गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसले सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउँछ । राम्रो यौन जीवनले शारीरिक तथा मानसिक समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्छ ।
यौनका विषयमा तयारी र सोच्ने तयारीका विषयमा जानकारी आवश्यक हुन्छ । अस्तव्यस्त जीवनशैलीले मानिसले यौनका विषयमा सोच्ने र तयारी गर्ने मौका पाउँदैन । त्यसैले सबैकुराको व्यवस्थापन गरेर आफ्नो यौन पार्टनरसँग रमाउन समय निकाल्न आवश्यक हुन्छ ।
यौन क्रियामा पनि नयाँ नयाँ तरिकाको प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पहिल्यैदेखि नयाँ नयाँ तरिकाको कल्पना गर्नुपर्छ । त्यसले उत्तेजित बनाउन सहयोग गर्छ । कल्पनाले मानिसलाई अन्यक्रियाकलापबाट टाढा राख्न सहयोग गर्छ । यौन कल्पनाको आनन्द पनि हो ।
दाम्पत्य जीवनमा दुवैजनाले आफ्नो समय निकालेर प्रेमभाव व्यक्त गर्ने समय निकाल्नुपर्छ । जुन समयमा अन्य क्रियाकलाप पनि संगसंगै गर्न सकिन्छ । यसले सामिप्यता बढाउन सहयोग गर्छ ।
दुवैजनाबीचमा यौन सम्बन्धको एउटै चाहना र गति हुँदा पनि यौन सम्बन्ध राम्रो हुन्छ । त्यसैले एउटा तालिका बनाएर नै आफ्नो यौन जीवनलाई सफल पार्न सकिन्छ । महिला र पुरुष दुवैले यसलाई ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । एजेन्सी